Musharrixiinta u taagan xilka guddoomiyenimada golaha shacabka – Kalfadhi
April 19, 2018 April 19, 2018 Kalfadhi
Xildhibaanno badan ayaa u sharaxan xilka guddoomiyenimada golaha shacabka Soomaaliya si ay bedel ugu noqdaan Maxamed Cusmaan Jawaari oo toddobaad ka hor si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu xilkasi isaga casilay.
Qaar kamid ah xildhibaannada u tartamaya booskan waxay qabten shirar jaraa’id oo ay ku shaaciyen in ay u musharaxiin u yihiin xilkasi.
Xildhibaan Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo hore u soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa 17-kii bishan caddeeyay inuu musharax u yahay xilka guddoomiyenimada golaha shacabka.
‘’ Waxaan maanta caddeynayaa in aan musharax u ahay xilka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya,’’ ayuu yiri mudane Aadan Madoobe.
Xildhibaanka ayaa sheegay in ujeedada uu xilkan ugu tartamayo ay tahay in uu wax badan ka qaban karo dhameystirka hannaanka dowlad wanaagga iyo howlaha baarlamaanka.
Dhinaca kale, Xildhibaan Maxamed Mursal sheikh Cabdiraxmaan oo sido kale ah wasiirka gaashandhigga Soomaaliya ayaa 18-kii bishan oo shalay ahayd shaaciyay in uu u tartamayo xilka guddoomiyenimada golaha shacabka.
‘’ Bismillaah,maanta shirka saxaafadeed waxa uu ku saabsan yahay in aan shaaciyo go’aankeyga ah in aan u tartamo qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.’’ Ayuu shirkiisa jaraa’id ku yiri Mursal.
Mudane Mursal ayaa ka codsaday xildhibaannada golaha shacabka iney codkooda siiyan,isaga oo ballan qaaday in wax qabadkiisa uu muuqan doono haddii xilkan loo doorto.
Xildhibaan Mursal ayaa wasiirka tamarta iyo biyaha ka soo noqday xukuumaddii ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke.
Waxa uu sido kale soo noqday safiirka Soomaaliya ee Turkiga,xilkaasi oo loo magacaabay 2011-kii waxa uu hayay muddo 5 sanno ah.
Xildhibaannada kale ee xilkan u tartamaya waxaa kamid ah wasiirka tamarta iyo biyaha ee xukuumadda Soomaaliya,Saalim Caliyow Ibro.
Wasiirka ayaa hore u soo noqday ra’iisul wasaare ku xigeen iyo wasiirka xannaada xoolaha,dhirta iyo daaqa.
Waxaa jira xildhibaanno kale oo aan weli si rasmi ah ugu dhawaaqin in ay xilkan u tartamayan.
Maxamed Cismaan Jawaari oo golaha shacabka soo hogaaminayay muddo sanno ah ayaa 8-dii bishan Abriil iska casilay xilka guddoomiyenimada golaha kadib muran siyaasiyadeed oo qaatay muddo seddex toddobaad ah oo soo kala dhex galay gudoomiyaha iyo golaha fullinta,sida Jawaari uu sheegay.
Xildhibaannada golaha shacabka ayaa laga doonaya in ay muddo 15 cisho ah ku soo doortan guddoomiye cusub,mudadasi ka soo billaabatay markii uu guddoomiyaha si rasmi ah isku casilay,sida ku qoran xeer hoosaadka golaha shacabka.